रंगशाला बनाउँदा करोडौँ फसेपछि हात झिके धुर्मुस सुन्तलीले, मजदुरलाई पैसा उठाएर बाटोखर्च दिँदै वि दा गरिदिँदा धुर्मुस सुन्तली दुवै रोए, अब के हुन्त त रंगशाला ? भिडियो हेर्नुस् – Gazabkonews
रंगशाला बनाउँदा करोडौँ फसेपछि हात झिके धुर्मुस सुन्तलीले, मजदुरलाई पैसा उठाएर बाटोखर्च दिँदै वि दा गरिदिँदा धुर्मुस सुन्तली दुवै रोए, अब के हुन्त त रंगशाला ? भिडियो हेर्नुस्
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सहयोग उठाउँदै रंगशाला निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । क्रिकेट मैदान निर्माणमा आर्थिक अ भाव भएपछि सहयोग जुटाउन सिताराम कट्टेल धुर्मुस मेची महाकाली अभियानमा निस्किएका छन् । रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक संकलन गर्न अभियानमा निस्कदा उनलाई रंगशाला निर्माणमै जुटेका मजदुरले विदाई गरेका थिए । उनीहरुले विदाईका क्रममा बाटोमा लाग्ने खर्च उठाएर धुर्मुसलाई दिएका थिए ।
मज दुरले पैसा दिँदा धुर्मुस निकै भावुक भए । मजदुरहरुले भने, घरको छोराछोरी बाहिर जाँदा बाटोखर्च दिएर पठाउनु पर्छ । हामीले त्यही भूमिका निर्वाह गरेका हौँ, लक्ष्य पुरा गरेर फर्कनुहोला शुभकामना छ । यसरी पैसा दिँदा त्यहाँको माहौल पनि निकै भावुक भएको थियो ।
ओलीले ए क्सन लिएपछि माधव पक्षका यी दुई नेता सम्पर्क विहिन : नेकपा एमालेले पार्टीहित र अनुशासन विपरित काम गर्ने चार नेतासँग स्पष्टिकरण पत्र पठाएको छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई आज स्पष्टिकरण पत्र बुझाएको हो ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले खामबन्दी स्पष्टिकरणपत्र बुझाएका हुन् । नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डेका स्वकीय सचिवले पत्र बुझेका छन् भने भिम रावल र धनश्याम भुषाल भने सम्पर्क विहिन भएका छन् ।
रावलले स्पष्टिकरणपत्र बुझ्न अश्वीकार गर्दै पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई घर भित्रै छिर्न दिएनन् । घर भित्र छिर्न नपाएपछि ति कर्मचारीले रावल बस्ने टोखास्थित कोलोनीको सी १४ नम्बर घरको लेटर बक्समा पत्र छि रा एर फर्किएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।